မိုးကောင်းကင်ထက်ကအသံ – New Dream Media Ministry Inc
စာရေးသူ၏အမှာစကား ဖြတ်သန်းခဲ့သောဘဝပုံရိပ် ကျေးဇူးတင်စကား ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း မာတိကာ စာရေးသူ၏အမှာစကား
ပုံပြင်စာအုပ် ဖြစ်မြောက်ခွင့် ပေးခဲ့သည့် အဖ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါ၏။
“ထူးဆန်းသောလူနှင့် အခြားပုံပြင်များ” စာအုပ်ထွက်ရှိပြီးနောက် “မိုးကောင်းကင်ထက်က အသံ” ပုံပြင်စာအုပ်ကို တဖွဖွမေးမြန်းကြသော ကလေးများ၊ ကျွန်တော်၏ ရောင်းရင်းမိတ်ဆွေ ဘော်ဒါများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ။
ပထမဆုံး ထုတ်ဝေခဲ့သော ပုံပြင်စာအုပ်အတွက် ဝယ်ယူအားပေးသူ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အားလုံး၊ ရောင်းချပေးခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးမှ စာအုပ်ဆိုင်များကိုလည်း အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ။
ပုံပြင်စာအုပ်ကို ရင်ခုန်စွာ တည်းဖြတ်ပေးခဲ့သည့် ကျွန်တော်၏ ချစ်ဇနီး၊ အသင်းတော် အသီးသီးမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကလေးသူငယ်များ၊ လူငယ်များ၊ ကွန်ပျူတာ စာစီပေးသော MC နှင့် ဒီဇိုင်းအလှဆင်သော ကိုဖိုးသဒါး၊ ထုတ်ဝေသူနှင့် ပုံနှိပ်တိုက်မှ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံးကိုလည်း အထူးပင် ကျေးဇူး (ကျေးဇူး) တင်ရှိပါသည်။
ကလောင်အမည် – မုန်ပီး (စီးတီး)
အမည်ရင်း – ရှမ်ဂိုမုန်
မိဆအမည်- ဦးနက်ဇပေါင် + ဒေါ်ထွမ်ဇနမ်
မွေးနေ့ – စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်
ပညာဆည်းပူးရာ – အ.ထ. က (၁) ဟားခါး၊ အ. မ. က (၁) ဗဟို၊ အ.ထ. က (၂) အင်းစိန် – လှိုင်ကောလိပ်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် B.Sc. (Che)
ဝါသနာ – စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍများ၊
လက်စွဲ – ဘဝတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိသောနေရာ၌ ရှိရန်
စာပေလောကဝင်သည့်နှစ် – ၈ တန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းက
ပထမဆုံးဖော်ပြခံရသည့်စာမူ – မြတ်ကြေးမုံမဂ္ဂဇင်း – ၁၉၉၈ – ဇွန်လ “အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆုံးမခြင်း”
စာပေဆု- ၅၁နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲ “တတိယဆု”
အကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာ – (ပြည်တွင်း) – သန်လျင်ဖေသွင်၊ ဆိုး၊ သုခ၊ ကျော်ဝင်း၊ အကြည်တော်၊ မင်းခိုက်စိုးစန်
အိမ်ထောင်ပြုသည့်နှစ် – အောက်တိုဘာ ၂၈-၂၀၀၆
ပါဝင်သည့်စာပေကဏ္ဍ – မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့် စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့
အဖွဲ့ဝင်အမှတ် – ၆၉၅၁ – ကလေးပုံရိပ်ရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း (တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ)၊ အိပ်မက်သစ်၊ အသက်လမ်း
ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ် – ထူးဆန်းသောလူနှင့် အခြားပုံပြင်များ၊ မိုးကောင်းကင်ထက်ကအသံ၊ ကလေးသူငယ်ကမ္ဘာ၊ ကောင်းကင်ခရီး (မကြာမီ)
ကျွန်တော်သည် အပြာရောင် မိုးကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်မိတိုင်း မိုးကောင်းကင်အထက်၌ နေချင်မိသည်။ မိုးတိမ်များ မဲမှောင်နေသောအချိန်မျိုးတွင် မိုးကောင်းကင်ကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားမိသည်။ ဤကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်မြောက်များစွာနှင့် ပြည့်နေသော မိုးကောင်းကင်သည် လူသားတို့၏ဘဝတွင် များစွာ အချိတ်အဆက်ရှိနေမည်သာဖြစ်သည်။
ထိုမိုးကောင်းကင်၏အထက်တွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ တည်ရှိနေသည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲ။ ဧကန်အမှန် စင်စစ်ဖြစ်သည်။ ခေတ်ရာစုများစွာကတည်းက ဘုရားသခင်က ဤမိုးကောင်းကင်အထက်မှ အသံတော်အားဖြင့် လူများကို စကားပြောကာ သမ္မာတရား လမ်းကို ဖွင့်ပြခဲ့သည်။
ဤအကြောင်းအရာများက ကျွန်တော်နှင့် ကလေးသူငယ်များအကြားတွင် အဖြူရောင်လှိုင်း သဖွယ် ရင်ထဲတွင်စွဲငြိကာ “မိုးကောင်းကင်ထက်ကအသံ” အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
စာမူခွင့်ပြုချက်အမှတ် – ၂၃၂၀၄၆၃၀၉၀၈
တန်ဖိုး – ၈၀၀
ထုတ်ဝေကြိမ် – ပထမအကြိမ်
ထုတ်ဝေသည့်လ – အောက်တိုဘာ (၂၀၀၇)
မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်း – ဂျိုနသန် (ERA)
အတွင်းဒီဇိုင်း – ဖိုးသဒါး
အတွင်းသရုပ်ဖော် – ရန်ကြီးအောင်
ထုတ်ဝေသူ – ဒီကိတ်ချင့်ပေါင်၊ နှစ်ခြင်းစာပေ (၀၄၁၀၉)
ပုံနှိပ်တိုက် – နှစ်ခြင်းပုံနှိပ်တိုက် (၀၇၈၇၅)
အုပ်ရေ – ၁ဝဝဝ
မူပိုင် – Child Messenger
Sharing The Gospel, Making Disciples!
Instagram feed @newdreammedia
Created by New Dream Media Ministry Inc · Copyright 2022 · All rights reserved
အခန်း(၇) အေအိုင်ဒီအိတ်စ်။ February 28, 2022
အခန်း(၆) လိင်ဆက်ဆံခြင်း February 28, 2022
အခန်း(၅) မိဘကိုစွန့်ခြင်း။ February 27, 2022